रमाउने बहाना बन्दै पिकनिक - विशेष - साप्ताहिक
रमाउने बहाना बन्दै पिकनिक
चिसो बढेसँगै पोखरा क्षेत्रमा पिकनिकको माहोल गजबले जमेको देखिन्छ । पोखरा तथा आसपासमा थुप्रै पिकनिक स्थल छन् । आयोजकहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार नजिकै तथा टाढाको पिकनिकस्थल रोज्छन् । पोखराका पिकनिक स्थलमध्ये शान्तिवन वाटिका पिकनिक आयोजना हुने मुख्यस्थल हो । पोखरा बजारमै पर्ने भएकाले यो स्थल धेरैको रोजाइमा पर्छ । यसैगरी पोखरा माटेपानी गुम्बा नजिकै कार्कीडाँडामा रहेको पिकनिक स्थलमा रमाउनेहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् ।
रोयल ट्रेकका रूपमा परिचित ठूलाकोट पिकनिक स्थल अहिले धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको छ । कास्कीका सात ताल, साविक पोखरा, साविक लेखनाथका थुप्रै क्षेत्रमा धौलागिरि, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, मनास्लु, गणेश, लमजुङ हिमालका दृश्यसँगै कास्कीका विभिन्न गाउँका दृश्य हेर्दै रमाउने अवसर पाइन्छ । पुम्दीकोट टावरमा पुगेर पिकनिकमा रमाउन लालायित हुनेहरू उत्तिकै हुन्छन् । यहाँबाट पनि विभिन्न रमणिय दृश्य नियाल्दै पिकनिक खान पाइन्छ ।
फेवा, वेगनास, रूपा, मैदी, दिपाङ, खास्टे, न्युरिने, गुँदे तालको किनार पनि पिकनिकमा रमाउनेहरूको रोजाइमा पर्छन् । यसैगरी हेम्जा फेदी, पामे, धम्पुस, लुम्ले, काँडे, रुपाकोर्ट रिसोर्ट नजिकै, धारापानी, शान्तिस्तूपा, दोविल्ला, महेन्द्र गुफा, याम्दी, भुर्जुङखोला, कालिखोला, विजयपुरखोला, खपौदी, माछिकुना आदि ठाउँमा पुगेर पिकनिक आयोजना गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । यसरी आयोजना हुने पिकनिकमा अधिकांशले क्याटरिङकै सेवा लिन्छन् भने केहीले आफैं पकाउँछन् । केही भने घरबाटै विभिन्न परिकार लाँदै ड्राइ पिकनिकमा रम्छन् ।
त्यसका अतिरिक्त कास्कीका विभिन्न गाउँ, खोला किनारा, समाजघर, पार्टी प्यालेसमा समेत पिकनिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पाइन्छ । पिकनिक स्थल प्रयोग गरेबापत ठाउँ र समूहअनुसार निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । चिसो मौसममा घाम लाग्ने पारिलो ठाउँ तथा गर्मी मौसममा खोला किनारा एवं हावा चल्ने डाँडा पिकनिक खानेहरूको रोजाइमा पर्छ । पोखराबाट तनहुँको बन्दिपुर, व्यासगुफा, छाब्दीबराह आदि स्थानमा पिकनिक खान जानेहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् ।
प्रकाशित :माघ १३, २०७४
अमेरिकामा नेपालीको पिकनिक
दुलही बन्दै रेनेशा
आमा बन्दै एमी ज्याक्सन
लोकप्रिय बन्दै शर्माको गंगा जी
कुन देशमा कहिले सम्झिन्छ आमालाई वैशाख २१, २०७६
मातातीर्थ औंसीको महत्त्व वैशाख २१, २०७६
जसले यो वर्ष पदार्पण गरे वैशाख ३, २०७६
कसरी बित्यो कलाकारको ०७५ साल ? वैशाख २, २०७६
२०७५ मा को कति चले ! वैशाख २, २०७६
प्रतिवेदनमा नेपाल वैशाख २, २०७६
२०७५ : निराश फिल्म उद्योग चैत्र २८, २०७५